RASMI: Kooxda Manchester United oo heshiiska u kordhisay laacibkeeda khadka dhexe ee Scott McTominay – Gool FM
(Manchester) 23 Juun 2020. Scott McTominay ayaa heshiis cusub qalinka ugu duugay Manchester United, kaasoo kooxda ku sii hayn doonaa illaa bisha June sanadka 2025-ka, waxaana uu qiyaar u haystaa inuu sanad kale oo dheeri ah ku darsan karo.
23-sano jirkaan khadka dhexe ayaa kulankiisii ugu horreeyey saftay sanadkii 2017-kii, kulan ay wajaheen Arsenal, waxaana uu kooxda koowaad ee Man Utd u saftay 75 kulan, isagoo u dhaliyey lix gool.
Kaddib markii uu saxiixay heshiiskan cusub xiddiga xulka qaranka Scotland ee McTominay ayaa sheegay inuu ku farraxsan yahay heshiiskan cusub oo uu saxiixo kooxda oo mustaqbalka qeyb uga ciyaaro naadigan.
Tababaraha kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ammaanay laacibkan khadka dhexe waxaana uu dhankiisa sheegay inuu ku farraxsan yahay inuu muddo fog sii joogo Kooxda ugu hanashada badan horyaalka Ingiriiska.
FIFA oo labo koob adduun qabaneysa sanadka 2022... (Sidee loo kala ciyaari doonaa?)